योजनामै भागेका थिए सिद्धबाबा अदालतले अन्तिम आदेश गर्ने दिन भारत !
विराटनगर, ११ माघ । विवादास्पद हिन्दू धर्मगुरु सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर आफनो पूर्वयोजनाअनुसार भारत भाग्न सफल भएका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अन्तिम आदेश भएकै दिन ९ माघ बिहीबार दिउँसो इजलासमा मुद्दा सुनवाई भइरहेका कृष्णदास जोगबनी नाका भएर पूर्वयोजनाअनुसार भारत भाग्न सफल भएका हुन ।
आफैंले आफूलाई सिद्धबाबा कहलाएपछि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको नेपाल प्रहरीको पिएसओ (हबल्दार) लाई उनले नाकाबाट विराटनगर फर्काएका थिए । त्यसपछि उनी आफ्ना केही विश्वासिला अनुयायीहरूलाई लिएर ग१च८१५७ नम्बरको पजेरो गाडीमा सीमा पार गर्न सफल भएका थिए ।
बलात्कार जस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधका अभियुक्त रहेका कृष्णदासलाई नचिन्ने नाकामा कोही थिएनन् । तर पनि उनी आरामले आफ्नो गाडी लिएर नाकामा पुगी पिएसओ मुकेश साहलाई नेपाल नेपाल फर्काएर आफु भारत भाग्न सफल भएका थिए ।
अदालतमा पेशी सुनवाई भइरहेकै बेला भाग्नुपर्ने कारण
मुद्दाको पेशी रहेको दिन बिहान उपचारको बहाना बनाएर कृष्णदास सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ चतराधामस्थित आफ्नो आश्रमबाट बिहान ९ बजे विराटनगर हिँडेका थिए ।
विराटनगर आएर उनी कुनै अस्पतालमा भर्ना भएनन् बरु उनले आफ्ना सहयोगीहरूसँग गोप्य स्थानमा आफ्नो योजनाबारे छलफल गरेका थिए । उनको योजना भारत जाने र ‘हाइड’ हुने अनि उच्चबाट आफ्नो पक्षमा अन्तिम आदेश भए फर्कने नत्र उपचारको बहानामा अझै टाढा भाग्ने थियो ।
अदालतले उनलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा पूर्पक्षका लागि थुनामुक्त गराउन १४ पुसमा गरेको आदेश उच्चले बदर गरेर पुनः थुनामै राख्न अन्तिम आदेश गरेपछि उनी नेपाल फर्केनन् । अब उनी कि त भारतमै लुकेर बस्नेछन् कि त त उपचारमा गएको बहाना बनाएर सर्वोच्चमा उच्चको आदेश बेरितको भन्दै रितपूर्वकको अर्को आदेश गराउनका लागि अनुकूल समय पारेर सुटुक्क उपस्थित हुनेछन् । अब उनको योजना जिल्ला अदालतमा बकलपत्र गराउँदा साक्षीहरुलाई खरिद गर्ने , धमक्याउने देखी अन्य अनेक बहाना गरेर अदालतलाइ पार्ने सम्मको हुनसक्नेछ ।
घटना छानबिन गर्न अधिकारकर्मीहरूको माग
अदालतको आदेश भएमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले देश छाडेर विदेश जान पाउँदैन । देश छाड्नै परे गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर सिद्धबाबाको हकमा त्यस्तो आदेश नभएकोले उनले विदेश जानै नपाउनेचाहिँ होइन ।
तर अदालतमा संवेदनशील मुद्दाको पेशी भएकै दिन सुटुक्क भारत पस्नुले उनी योजनाअनुसार नै भागेको हो भन्ने शंकाका प्रशस्त आधारहरू भएको अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्,- ‘अरु दिन किन अभियुक्त बाबालाई उपचारबारे सुझेन र मुद्दा सुनवाई भएकै दिन दिउँसो उनी भारत भागे ?’
कथित सिद्धबाबा कृष्णदासबाट पीडित महिलाको पक्षमा लागिरहेकी सुनसरीकी महिला अधिकारकर्मी शुशीला उप्रेती पनि बाबालाई योजनाअनुसार मिलेमतो मै भारत भगाइएको बताउँछिन् । मुद्दा दर्ताका क्रममा पनि प्रहरीले गरेको व्यवहारले शंका उब्जाएकोले बाबा भारत भागेको बारे छानबिन हुनुपर्छ । उनी भन्छिन्—‘बाबालाई संरक्षण र सल्लाह दिनेहरु को–को थिए ? तारकब्रम्ह महायज्ञको करोडौं आम्दानी कहाँ गयो ? आदिबारे पनि खोजबिन हुनुपर्छ । ’
महिला अधिकारकर्मी शान्ति गजमेर सिद्धबाबालाई जोगाउन राज्यपक्ष नै लागेको दाबी गर्छिन् । यसैले उच्च अदालतको आदेशअघि नै बाबालाई भारत भगाइएको उनको आरोप छ । ‘जोगवनीसम्म प्रहरीलाई साथमै लग्नु र दिउँसै सबैका अगाडि नाकाबाट बाहिरिनुले यो पृष्टि हुदैन र ?’ उनले भनिन् ।
अधिकारकर्मी गजमेरले भनेझैं ९ माघ दिउँसो उच्च अदालतमा पेसी चलिरहेका बेला सुरक्षा सम्यन्त्रलाई ‘चक्मा’ दिँदै कृष्णदास सीमा पार हुँदै गर्दा सुरक्षा संयन्त्रले जानकारीसमेत पाएन । जब कि सामान्य चेकजाँचमा पनि उनी को हुन् भन्ने चिन्न कुनै गाह्रो थिएन ।
कृष्णदास बस्दै आएको चतरास्थित रामानन्द आचार्य सेवा पीठका अध्यक्ष गणेश विरहीचाहिँ बाबा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि बिहान उपचारका लागि विराटनगर गएको र त्यहाँबाट थप उपचारका लागि रेफर गरेपछि भारततर्फ गएको बताउँछन् । तर उनले भने झैं विराट अस्पताले उनलाई रेफर गरेको छैन । नत उनी त्यो दिन अस्पताल नै पुगेका थिए । बरु उनले विराटनगरका आफ्ना सहयोगी उद्योगी व्यापारीहरूसँग योजनाबारे छलफल गरेका थिए ।
आरोपबाट जोगिन अस्पतालमा नक्कली बिरामी
आफ्नै अनुयायी महिलाले आफूविरुद्ध बलात्कारको किटानी जाहेरी दिएपछि कसुरबाट जोगिन कृष्णदास १२ पुसमा सुटुक्क विराटनगर मुनालपथस्थित विराट नर्सिङहोममा सिकिस्त बिरामी बनेर भर्ना भएका थिए । जबकि उनी सिकिस्त बिरामी थिएनन् बरु गोप्य भेटघाटमा व्यस्त भए । अस्पतालको सुविधासम्पन्न डिलक्स क्याबिनमा बसका उनले औषधि पनि केही हजारको देखाउनका लागि मात्र प्रयोग गरेका थिए ।
प्रहरीले पक्राउ गर्ने डरले आइसियुमा भर्ना भएका उनलाई अस्पताले दुई दिनमै बाहिर निकालेको थियो । उनले प्रयोग गरेका औषधहरू पनि धेरै जसो छालामा लुतो र दाद आउँदा प्रयोग हुने खालका थिए । नक्कली बिरामी बनेर अस्पतालमा बसेका बाबालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न चौतर्फी चर्को दबाबपरेपछि सुनसरी प्रहरीले अस्पतालबाटै १६ मंसिरमा पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
बयान दिन आनाकानी गरेपछि सुनसरी प्रहरीले बाबालाई पाँचपटक सम्म अदालतबाट म्याद थप गराएको थियो । चलाख कृष्णदास अनुसन्धानको अवधिभर एक दिन पनि प्रहरी हिरासतमा बसेनन् । बरु प्रशस्त प्रमाणहरु भएपनि सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले उनलाई १४ पुसमा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर पूर्पक्षका लागि थुनामुक्त गर्‍यो ।
बिरामी भएको दाबी गर्दै विराट नर्सिङ होममा बसेका कृष्णदास त्यसपछि स्वस्थ्य भएर आश्रम फर्के । तर सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले लगत्तै जिल्लाको आदेश बेरितको भएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा १७ नम्बर गर्‍यो । र, सोही निवेदनउपर बिहीबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधिश प्रेमराज कार्कीको इजलासले गिरीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा राख्ने आदेश दियो । तर अदालतको आदेश आउनुअघि नै बाबा भारततर्फ भाग्न सफल भए ।
७ कक्षामा फेल भएर भागेका कृष्णदास वनस्पति गुणका डाक्टर बनेर फर्किएका थिए
एक नम्बर प्रदेशको सोलुखुम्बु जिल्लाको जुबुमा २०३१ सालमा जन्मिएका कृष्णदासको असली नाम कृष्णबहादुर गिरी हो । हाल उनका आमाबुबा दाजुभाइ सबैको घर सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२ चतरामा छ । उनका बाबु छविलाल गिरीका कान्छी श्रीमतीका सन्तान हुन् उनी । सोलुमा कक्षा ७ मा फेल भएपछि उनी बैरागिएर हिँडेका थिए ।
भारत पलाएन भएका कृष्णदासले भारतबाट फर्केर आफूले सिद्धि प्राप्ति गरेको बताउँदै सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ मा सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको ६० बिगाहा जमिन आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाउने भनेर ओगटेका थिए । २०६५ देखि उनले आफू वेदाचार्य र आर्युवेदको ज्ञाता भएको बताउन थालेका हुन् । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाएर आर्युवेद विश्वविद्यालयका लागि भनेर यज्ञ पनि उद्घाटन गराएका थिए ।
चतराधाममा उनले २६ माघदेखि ७ फागुन २०७५ मा पहिलो श्रीराम तारकब्रम्ह महायज्ञ आयोजना गरेका थिए । महायज्ञको उद्घाटन २६ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन् । यहायज्ञको उद्घाटन कार्यक्रममा उनी आफू ठूलो सिंहासनमा बसेर राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरू, सबैलाई आफूभन्दा तल बसाएका थिए । सोही दिन उनले नक्सा पास नगरी ८ बिगाहा जग्गामा बनाएको १ सय २८ कोठे भवन पनि राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गर्न लगाएका थिए ।
उद्घाटनकै अवसर पारेर एक नम्बर प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा हरित अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । हराभरा र स्वच्छ बनाउन बहुवर्षे हरित महाअभियानका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो ।
कृष्णबहादुरबाट कृष्णदास गिरी
पटक–पटक १० दिनसम्म माटोमुनि विनाअक्सिजन निराहार समाधिमा बसेर आफूलाई महायोगी सिद्धपुरुष कहलाएका कृष्णदासले आफूलाई योगी तथा वनस्पति गुणमा विद्यावारिधी हासिल गरेको विज्ञ डा. श्रीकृष्ण दासजी महाराज भनाउने गरेका छन् ।
चतरामा उनले महायोगी सिद्धबाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठान र जगतगुरु श्रीरामानन्दाचार्य सेवापीठ नेपाल नामको मठ पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । भारतीय बाबाहरूसँग कृष्णदासको राम्रो सम्बन्ध छ । कृष्णदासलाई सोलु र सुनसरीबाट अलग–अलग नेपाली नागरिकता लिएको आरोप लागेपछि उनी सोलुको नागरिकता परित्याग गरेर कृष्णबहादुरबाट कृष्णदास गिरी बनेका थिए ।
अलग अलग नम्बरका चारवटा मोवाइल बोक्ने कृष्ण्दास कतिसम्म चलाख थिए भने उनी अलग अलग प्रयोगजनकालागि अलग अलग मोवाइल प्रयोग गर्दथे । आश्रममा हुँदा उनले बोक्ने नम्बर ९८५२०२५८८५ थियो । उनले साधक र सेविकाहरुलाई गालीगलौज गरेर त्रसाउने गरेका थिए ।
पटक पटक चीन र थाइलेण्ड र भारत जानेआउने गरेका कृष्णदासको उच्च व्यपारीहरुसँग साँठगाँठ थियो । थाईलेण्डका राजाले बोलाएको भनेर त्याँ पुगेका उनले सयौ केजी चाँदीका सिक्का ल्याएका थिए । उनले पटक पटक बहाना वनाएर नेपालका बहुमुल्य पत्थर र जडिबुटीहरु बिदेश निर्यात गराउने गरेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन । कतिसम्म भने कृष्णदासले पटक पटक बिभिन्न स्थानमा लगाएको समाधिपनि फेक भएको सहयोगीहरु बताउँछन ।